इन्टरनेटमा व्यापक ठगी : उपभोक्ता मारमा परेपनि सरकारी नियामक निकाय किन मौन ? | Safal Khabar
इन्टरनेटमा व्यापक ठगी : उपभोक्ता मारमा परेपनि सरकारी नियामक निकाय किन मौन ?
कम्पनीबीच अहिले पनि बढीभन्दा बढी ‘एमबीपीएस’ को ‘अफर’ देखाएर ग्राहक ठग्ने होडबाजी
आइतबार, १९ माघ २०७६, ११ : १५
६ महीना अगाडि पत्रकार लेनिन बन्जाडेलाई वल्र्डलिंकका प्रतिनिधि घरमै पुगेर नेट टीभीको डेमो देखाए । टीभीका अतिरिक्त ‘फिल्म ग्यालरी’ र ‘यूट्युब’ हेर्न पाइने पनि बताए । उनी रु.१८ हजार ७०० तिरेर वल्र्डलिंकको वार्षिक ग्राहक बने । तर तीन दिनमै ‘नेट टीभी’ मा ‘यूट्युब’ बन्द गरियो । बन्जाडेले कम्पनीमा फोन गरेर बुझे, प्राविधिक कारणले ‘यूट्युब’ नचल्ने भनियो ।
स्रोत: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
वल्र्डलिंकले पूर्व जानकारी नगराई सेवा अवरुद्ध गरेको भनेर बन्जाडेले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी गरे । सेवा प्रदायकले शर्त बमोजिम सेवा नदिएकोमा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका बन्जाडेले २०७६ माघ पहिलो सातासम्म पनि प्राधिकरणबाट कुनै जवाफ पाएका छैनन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–६ चुनदेवीकी मञ्जु थपलियाको फुर्सदको साथी भनेकै इन्टरनेट हो । मञ्जुले वार्षिक रु.१६ हजारमा वल्र्डलिंकबाट २५ ‘मेगाविट्स पर सेकेन्ड’ (एमबीपीएस) क्षमताको इन्टरनेट किनिन् । चार वर्षदेखि वल्र्डलिंकको सेवा लिइरहेकी मञ्जुका भनाइमा, शुरूका डेढ वर्षसम्म सेवा राम्रै थियो । अहिले राम्रोसँग भिडियो चल्दैन । दिनमा निकै ‘स्लो’ हुने इन्टरनेट राति ११ बजेपछि भने अलि ‘फास्ट’ चल्छ । उनी भन्छिन्, “पटक–पटक फोन गर्दा पनि मर्मत हुँदैन । ‘अनलाइन मूभी’ हेर्न ‘बफरिङ’ हुन्छ । २५ एमबीपीएस भने पनि ‘साइट’ साह्रै ढिलो चल्छ ।”
नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयका प्रमुख डा.राजीव सुब्बाले सुविसुको इन्टरनेट प्रयोग गरेको साढे चार वर्ष भयो । पछिल्लो एक वर्षदेखि घरमा ‘भायोनेट’ को पनि सेवा लिएका छन् । सुविसुको इन्टरनेटमा ‘स्पीड’ मन नपरेपछि अर्को पनि सेवा लिएको उनी बताउँछन् ।
पहिलेको तुलनामा इन्टरनेटमा धेरै सुविधा छन् तर प्रविधिले जति सहज बनाएको छ नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले त्यो सुविधा उपभोक्तालाई दिन नसकेको उनको बुझाइ छ । सुब्बा भन्छन्, “२५ वर्ष अगाडि मर्कन्टाइलको सेवा निकै महँगो थियो । अहिले महीनाको रु.२–३ हजार भए राम्रो ‘स्पीड’ भएको इन्टरनेट पाउन सकिन्छ । तर, आईएसपीहरूले ‘सेयरिङ’ गर्ने ‘मेकानिजम’ प्रयोग गर्छन् जसले गर्दा आफूलाई इन्टरनेट चाहिएको समयमा समस्या हुन्छ ।”
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय विद्युत्को घर रानीवन ढुंगेधारामा जोडिएको इन्टरनेट सामान्यतया महीनामा तीन पटक बिग्रन्छ । लामिछाने भन्छन्, “फोन ग¥यो हुन्छ भन्छन्, सेवा पुनः संचालन हुन झन्डै एक साता लाग्छ ।”
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूसँग गरेका कुराकानीबाट के भेटिन्छ भने– प्रति महीना रु.१ हजारदेखि रु.३५०० सम्म तिर्ने उपभोक्ताको घरमा सामान्यतया महीनामा तीन/चार दिन इन्टरनेट चल्दैन । अनि उपभोक्तालाई लोभ्याउन न्यूनतम ८ ‘एमबीपीएस’ देखि ३५ ‘एमबीपीएस’ को विज्ञापन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने इन्टरनेट सेवाको गति भने त्यसको एक चौथाइ पनि हुँदैन ।
बजारमा कम्पनीबीच अहिले पनि बढीभन्दा बढी ‘एमबीपीएस’ को ‘अफर’ देखाएर ग्राहक तान्ने होडबाजी छ । ठगी यहींबाटै शुरू हुन्छ । ग्राहकलाई ‘एमबीपीएस’ भनेको ‘मेगाबाइट’ प्रति सेकेन्ड भनेर भन्ने गरे पनि ग्राहकलाई ‘मेगाबाइट्स’ र ‘मेगाबिट्स’ मा फरक छुट्याउन मुश्किल हुन्छ । किनकि ःद्यउक भन्दा ःदउक आठ गुणा सानो हुन्छ । अर्थात् एक ‘मेगाबाइट्स’ बराबर आठ ‘मेगाबिट्स’ हुन्छ । अनि सेवा प्रदायक कम्पनीले भन्ने वेलामा ‘मेगाबाइट’ भन्ने र सेवा दिने वेलामा ‘मेगाबिट्स’ मा सेवा दिने काम गरिरहेका छन् ।
इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ता ठगिएको विषयमा नियामक निकायलाई थाहै नभएको होइन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी विभाग प्रमुख अनुप नेपाल भन्छन्, “सिंहदरबारभित्रै महीनामा ५/७ पटक ‘सिस्टम ब्रेक’ हुने गरेको छ । आईएसपीहरूले कहिले तार काटिएको त कहिले पोल ढलेको तथा कहिले ‘सर्भर’ ले काम नगरेको बहाना बनाउँछन् ।”
विघटित उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोगका पूर्वप्रमुख तथा सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईका विचारमा उपभोक्ताले सम्झौता बमोजिम सेवा पाए/नपाएको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि गरिरहेको छैन । भट्टराई भन्छन्, “सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारिरहेको छ । इन्टरनेटमै समस्या देखिएपछि कसरी ‘डिजिटल’ नेपाल बन्ला ?”
कोटेश्वर सहयोगी नगरमा वल्र्डलिंकको सेवा लिएका अटोपार्टस् व्यवसायी दिनेश अधिकारी भन्छन्, “तीन महीना अगाडि इन्टरनेट बिग्रियो, कम्पनीमा फोन गरें, सुनुवाई भएन । नियामक निकाय प्राधिकरणको फोन नम्बर पत्ता लगाएर फोन गरें । स्वयम् आएर उजुरी दर्ता गर्नुस् अनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनियो ।” अधिकारी भन्छन्, “सूचना र प्रविधिको विकास दु्रततर गतिमा भएको भनिएको क्षेत्रकै नियामक निकायमा अनलाइनबाट गुनासो सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेनछ । दिक्क लाग्यो उजुरी गर्नै गइनँ । चार दिनपछि आफैं सेवा शुरू भयो ।”
२०७२ सालमा जारी सूचना तथा सञ्चारप्रविधि (आईसीटी) नीतिले इन्टरनेट ‘पहुँचयोग्य बनाउने’ लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२० सम्म सम्पूर्ण नेपालीमा ‘ब्रोडब्यान्ड’ इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार आफैंले २०७५/७६ को बजेटबाट १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गर्ने घोषणा ग¥यो । तर आइएसपीहरुले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारले मर्मत सम्भार शुल्कलाई वैधता दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, “इन्टरनेट सेयरिङको विषयमा ग्राहकले उजुरी गरे प्राधिकरणको टोलीले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ । मुख्य कुरा ग्राहक सचेत हुनुपर्छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन ग¥यो/गरेन भनेर सेवाग्राही सचेत भयो भने मात्रै पनि कम्पनीहरूले ठग्न सक्दैनन् ।”
#इन्टरनेट #ठगी #नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
Email: [email protected] , marketing.[email protected] , [email protected]